ကံကို ယုံကြည်လွန်းသူများဖြစ်လေရာ ကိစ္စတိုင်း ရှေးဘဝကုသိုလ်ကံကြောင့်ဟုယူဆ၍ဖြေသိမ့်နှစ်သိမ့်တတ်သူ
များပေါများနေသေးသရွေ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှု၊ မတရားနှိပ်စက်မှုများ ဆက်လက်ထွန်းကား
နေဦးမည်မှာ ကမ္ဘာလောက၏ နိယာမပင်ဖြစ်သည်။ အားကြီးသူက အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်၏။ အားနည်းသူ
က ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်သည့်အလျောက် မိမိတိုရအားထားရာဟူ၍ ဘုရားမှတပါး အခြားမရှိပြီဟူသောအယူအဆဖြင့်
ဘာသာရေးကိုသာ အားကိုးယုံကြည်ရာအဖြစ် နက်နက်ရှိုိင်းရှိုင်း ကိုးကွယ်ကြ၏။ တကယ်တော့လည်းလူပီသ
ပေလော။ မိမိတိုင်းပြည်၏အစိုးရကိုယုံကြည်အားကိုး၍မရခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်ရာအဖြစ်ဖြစ်တည်ခွင့်မရရှိ
တင်ပြလိုသည့်အကြောင်းအရာမှာ ဘာသာတရား၏အထွတ်အမြတ်ဖြစ်ဖြစ်သော ဘုရားရှင်၏သားတော်ရဟန်း
မထားသော စစ်ခွေးဘီလူးတို့၏လက်အောက်တွင် အဘယ်ကဲ့သို့သော ဘာသာနှင့်သာသနာတော်ကထွန်းကား
ပေလိမ့်ဦးမည်နည်းဆိုသည်ကို စနစ်တကျဆန်းစစ်ဖို့လူသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်၏။
မိမိကိုယ်ကို လက်လျှော့၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော အခွင့်အရေးများစွာတို့ကို ကြုံကြိုက်ခဲ့ရသူများရှိပေလိမ့်မည်။
ထိုလားပေါင်းများစွာတိုရ၏ အဓိကတရားခံမှာ ကြောက်ရွံ့ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အကြိမ်ကြိမ်အခါခါသေဆုံးရခြင်း၏
အကြောင်းတရားသည် ကြောက်ရွံရခြင်း၊ အားနာခြင်းတိုရ၏ အဓိကရေသောက်မြစ်ပင်ဖြစ်၏။
နေဦးမည်ဆိုပါက ထိုခါးသက်ခြင်း အရသာသည်ပင်လျှင် ချိုမြိန်နေပေလိမ့်မည်။ မိမိ၏ရန်သူက ပြတ်သားသည့်
ပြတ်သားရမည့် အရေးအကြောင်းများအား ဖြတ်တောက်ပစ်တတ်၏။ ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံအတော်များများမှ Sanctionပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်တချို့ကဟိုလူကတော့မပါသင့်ပါဘူး၊ဒီလူကတော့မပါသင့်ပါဘူး၊ကောင်ပါ့မလား၊သင့်တော်
တကယ်တော့ဖြစ်သင့်၏ စစ်ဘီလူးတို့အနေဖြင့် အပြစ်မဲ့ရဟန်းပြည်သူတို့ကိုပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရာတွင်
ကောင်းပါ့မလား၊ သင့်ပါ့မလား ဟူသော လားပေါင်းများစွာ မရောယှက်ခဲ့ကြပေ။
ထိုနည်းတူ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းများစွာတို့ကိုလည်း ဤနည်းနှယ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြ၏။ ထိုကြောင့် ဖြစ်ပါ့မလား၊ သင့်တော်ပါ့မလား ဆိုသည့် လားပေါင်းများစွာတို့ကို စဉ်းစားသင့်နေရာ၌သာ စဉ်းစား၍ လုပ်သင့်သည့် ကိစ္စများတွင် လားပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်မရောယှက်စေရန်အတွက် လိုအပ်လှပေသည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ထင်မြင်ယူဆချင်ပါသည် ။
Posted by Democratic Information Department at 1:03 PM
http://www.targetednumberpicking.com/ - levitra online
http://teamjsf.org/ - cheap phentermine online
to torebki batycki , torby damskie , torebki kazar . torby damskie , torby listonoszki ?
If the applicant to go with Online application program modality which is to average that your payday after takingapayday Loan $45 if nonrecreational in less than 30 days. It is of immense facilitate as such, if you don't own any cite bureaus. kingdom and they implore at the Westerly wall, that was presented. Of trend, with all kinds of loans that are particularly designed for unretentive-term guaranteed payday loans or short term lending. http://www.guaranteedpaydayloans1.co.uk/ 12 month guaranteed payday loans are specifically formed to let the bad deferred payment. How isadifficult sentence.